U Jon Gyi Music Facebook feed – U Jon Gyi
U Jon Gyi Music Facebook feed
by U Jon Gyi
Latest U Jon Gyi Music Facebook Posts
U Jon Gyi "Everybody Knows that You Love ME" demo
ကျွန်တော့်ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက်သီချင်းအသစ်လေးပါ. သီချင်းနာမည်က "Everybody knows that you love me ( မင်းငါ့ကို ချစ်နေတာလူတိုင်းသိတယ်"
Brand New Music Demo for my Amazing fans! "Everybody Knows That You Love me" ... See more
ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံး ပိရမစ်ကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြတယ်. ကျွန်တော်နဲ့ သီချင်းတွေအများကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖူးတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းလေး Harryk Kaung.
We found the most important pyramid! My very good friend Harryk Kaung Who was in many music videos with me! It Was great to see my good friend tonight! ... See more
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် သင်တို့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးနေပါတယ် ။ ကျွန်တော်စပ်သောသီချင်းကိုကျတော့မိတ်ဆွေ က ပီယာနိုတီးပေးပါတယ်။ ဒီနေ့ပြီးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်. ချစ်ပရိတ်သတ်တွေ စောင့်မျှော်ပြီးအားပေးကြပါဦး. မြန်မာပြည်ကိုချစ်တယ်. ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့် Page ကို like and share လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ.
Free styling and working onanew song for you today with my friend Obadiah Ayete ! Stay tuned for the new song hopefully today first time ever released for my wonderful amazing fans! I love you Myanmar! Please like and share my page!!!!! ... See more
Photos from U Jon Gyi's post
12 years ago and today - the wheel turns. I have learned much and I am fighting for what the next turning will bring. Kay Sah Mah She Bu Click here to see where U Jon Gyi began ==> https://youtu.be/wmLuT3aJw9E ... See more
A lot of fun today out and about And I met withagreat fan who works on helping to clean up the city in her own way by training young people to pick up and clean up areas so very proud to meet her. And then I was off to get some lunch near the largest Pagoda on earth! ... See more
၂၄ နာရီအတွင်းမှာ ကျွန်တော့်စာအုပ်အပိုင်း၃ အထိကို download ဆွဲကြတာ ၃၃,၄၉၂ ရှိသွားပါပြီခင်ဗျာ.
Free! click here ==> http://ujongyi.com/download/5270/
WOW! 33,492 downloads of the first3chapters of my book
IN JUST 24 hours!!!!! I LOVE MY FANS!!!!!!!!!!!!!! ... See more
သင်တို့ ကျွန်တော့်ကို JOOX app သုံးစေချင်ပါသလား
Do you want me to use JOOX?
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် တုိုင်း အပါတ်စဉ်ဆွမ်းလောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျတော် မြန်မာပြည်ကုို စတင်ရောက်ရှိသော ၂၀၀၂ ခုနှစ် က စတင်ပြီး ကျတော်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဆွမ်းလောင်းရန် အိမ်ကထမင်းချက်ကုိုညွန်ကြားထားပါတယ်။
Every Wednesday at my home whether I’m here or not I have instructed my maid to make sure this happens since I first arrived in Myanmar in 2002. ... See more
ကျွန်တော့် ဟီးရိုးရဲ့ရုံးခန်းအပြင်ဖက်မှာ နေ့လည်စာသုံးဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ သူကတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကို ဖော်ဆောင်နေပါတယ်။ အစတုန်းကတော့သူတစ်ယောက်တည်းပဲ။ သူယုံကြည်ရာ အရေးပါတယ်ထင်တာကိုပဲသူတစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သူ အသက်၂၇ နှစ်နဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတော့ ၃၂ နှစ်မှာ လုပ်ကြံခံလိုက်ရတယ်။
ကျွန်တော်နေ့လည်စာ စားနေရင်းနဲ့ သူ့အကြောင်းတွေ တွေးနေမိတယ်ဗျာ။
Having lunch just outside the office of my hero… He was an example of what one man can do with his life. In the beginning he was completely alone and armed only withafocused mind for what he believed was important. Remember he did this all starting at 27 years of age And was gone by 32. I’d like to have my lunch and think of him and what he must’ve been like. ... See more
U Jon Gyi
U Jon Gyi Music Album ၈ “eight” – Track ၈ “Do You Know Myanmar?”
Follow UJG / Music / Book
© Copyright 2018. 10:09 Marketing & Media Production LLC